အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၂၀၀ ကျော် ထိုးနှံပြီးဖြစ် - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဧပြီလကုန်တွင် ပြည့်မီရန် ချမှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၂၀၀ မှာ ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၂၁ ရက်၌ ကြေညာခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ အများစုရှိသည့် လူဦးရေအားလုံး ကာကွယ်ဆေး ရရှိရေးမှာ ပြောင်းလဲမှု စတင်ပြီဖြစ်သဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု အဆင့်အသစ်သို့ ဝင်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်က ပြောခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်ရှိ Javits စင်တာရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသောနေရာတွင် လူအများအား စစ်ဆေးနေသော အမျိုးသားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“အခု ဒီချိန်ကတော့ သမိုင်းဝင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရဲ့ အဆင့်အသစ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အလှည့်ကို စောင့်နေတာဆိုရင်တော့ သိပ်မကြာတော့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပါပြီ” ဟု ဘိုင်ဒန်က ပြောသည်။
ဧပြီ ၂၁ ရက်အထိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၂၁၅ သန်းခန့် ထိုးနှံပေးပြီးဖြစ်သလို နိုင်ငံတစ်ဝန်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၂၇၇ သန်း ဖြန့်ဖြူးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း CDC အချက်အလက်များ၌ ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိတွင် အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၈၇ သန်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန် လူဦးရေ၏ ၂၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း CDC အချက်အလက်အရ သိရသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁၃၄ သန်းခန့်မှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်စီ ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကာ လူဦးရေ၏ ၄၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံပြီးသူများအကြား လူဦးရေ ၃၅ သန်းမှာ အသက် ၆၅ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများဖြစ်ပြီး လူဦးရေး၏ ၆၅.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း CDC အချက်အလက်က ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သုံးမျိုးရှိကြောင်း သိရသည်။အမေရိကန် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနက အမေရိကန် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူ Pfizer နှင့် ဂျာမန် BioNTech ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ထားသော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးနှင့် အမေရိကန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူ Moderna မှ ထုတ်လုပ်သော နောက်ထပ်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးတို့အား ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် Johnson & Johnson ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ယင်းဆေးအား ထိုးနှံသူ ၆ ဦးတွင် ရှားပါးသော သွေးခဲဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ အမေရိကန်တွင် စုစုပေါင်း Pfizer/BioNTech ကာကွယ်ဆေး ၁၁၃ သန်း အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် Moderna ကာကွယ်ဆေး ၉၄ သန်း ထိုးနှံပြီးဖြစ်သလို Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေးအား မရပ်ဆိုင်းမီ ၇.၉ သန်း ထိုးနှံထားကြောင်း CDC အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-04-22 04:18:26|Editor: huaxia
WASHINGTON, April 21 (Xinhua) — More than 200 million shots of COVID-19 vaccines have been administered in the United States as of Wednesday, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
There are three COVID-19 vaccines authorized for emergency use in the country.
Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine was approved for emergency use on Feb. 27, but it was halted for use last week after rare blood clotting cases emerged in six recipients.
According to CDC data, currentlyatotal of 113 million Pfizer/BioNTech doses and 94 million Moderna doses have been administered in the United States, while 7.9 million Johnson & Johnson shots have been administered before its pause. ■
1- Members of the National Guard help drivers check ataCOVID-19 vaccination site on the campus of California State University of Los Angeles in Los Angeles County, California, the United States, Feb. 22, 2021. (Xinhua)
2- Members of the National Guard check people in ataCOVID-19 vaccination site at the Javits Center in New York, United States, April 6, 2021. (Photo by Michael Nagle/Xinhua)
ဧပြီ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက် အတွင်း အိန္ဒိယနှင့် ဗြိတိန် နှစ်နိုင်ငံကြား ပျံသန်းမည့် Air India လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ဖျက်သိမ်း